भर्खरै ट्रम्पले विज्ञप्ती नै निकालेर यतिसम्म भनेपछि बाइडेन च’कित्, विश्वभरका नेताद्वारा भ’र्त्सना | Public 24Khabar
Home News भर्खरै ट्रम्पले विज्ञप्ती नै निकालेर यतिसम्म भनेपछि बाइडेन च’कित्, विश्वभरका नेताद्वारा भ’र्त्सना
भर्खरै ट्रम्पले विज्ञप्ती नै निकालेर यतिसम्म भनेपछि बाइडेन च’कित्, विश्वभरका नेताद्वारा भ’र्त्सना
आ’जको वर्तमान समयमा, प्रत्येक व्यक्ति सबैभन्दा सु’न्दर देख्न चाहन्छन्, तर बढ्दो वायु प्रदूषण र व्यक्तिको तनावको कारण, छा’लाको प्राकृतिक चमक हराउँदै जान्छ, जसको कारण अ’नुहारको चाउरीपन दिनदिनै बढ्दै जान्छ । कारण यो छ कि अनुहारमा कुनै पनि चमक देखा पर्दैन, त्यसैले मानिसहरूले बजारमा फेला परेको रासायनिक उत्पादनहरू बढी मात्रामा प्रयोग गर्छन् । जसले गो’रोपन बढाउँछ तर क्रीम प्रयोग गर्न रोक्ने बित्तिकै त्यसको साइड इफेक्ट देखा परिहाल्छ, त्यसैले रासायनिक बढी मुल्य पर्ने उत्पादनहरूको सट्टा तपाईले घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
यदि तपाईं आफ्नो कालो छा’ला हटाउन चाहानुहुन्छ भने यसका लागि हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो उपाय बताउने छौं जुन तपाईंको छा’लालाई नोक्सान नगरी सुधार गर्दछ, आउनुहोस् जानौँ त्यो के हो त ? आजको पोस्टमा हामी तपाईलाई जुन चिजको बारेमा बताउने कुरा गर्दै थियौँ त्यो हो आलु । आलु एक यस्तो चिज हो । जसलाई हामी सब्जी बनाएर उपयोगमा लिने पनि गर्दछौँ। तर यसले खानबाहेक अन्य कुराहरु जस्तै त्वचालाई सुन्दर बनाउनमा पनि यसले काम गर्दछ ।
आउनुहोस् जानौँ काँचो आलुलाई त्वचाको लागी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त ? यदि तपाई रातको सुत्ने स’मयमा आलुको टुक्रालाई काटेर आफ्नो अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसरी लगाउनाले तपाईको अनुहारमा भएको कालो धाग धब्बा र पिम्पल्स हटेर जानेछ र अनुहारको रगं पनि बदलिनेछ। यदि तपाईको अनुहार कालो कालो छ भने पनि यो ढिलो ढिलो गरेर भएपनि हटेर जानेछ । यदि तपाई आफ्नो अनुहारको कालोपन हटाउन चाहानुहुन्छ भने पनि तपाई आलुको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
यसको लागी तपाईले रातमा काँचो आलुलाई मिक्सरमा पिस्नुहोस् र यसमा १ चम्चा काँचो दुध मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । र यस पेस्टलाई रातको समयमा अनुहारमा राम्रोसँग लगाउनुहोस् र बिहान उठेर पानीले मुख धुनुहोस् । यस्तो गर्नाले तपाईको अनुहार चम्किनेछ । यदि तपाई आलुको पेस्टमा बेसन मिलाउनुभयो भने पनि यसले तपाईको त्वचालाई लाभ पुर्याउँदछ । यसले हाम्रो त्वचा अधिक मुलायम र सुन्दर बनाउँछ । यो एक प्राकृतिक घरेलु उपचार हो यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन । यस्तै थप जानकारी दिइएका छाै पढ्नुहाेला !
Previous articleसपना ए’क्कासी अ’स्वस्थ भएपछि राई इज किङ अतालिन्दै पुगे सपनाको घर,सपनामाथी यत्तिसम्म अ’त्याचार भएको रहेछ (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleटिकटकमा १ करोड १२ लाख मान्छेले हेरेको र खोजेको भा’इरल सानो भाई यिनै हुन्। आयुष घर्ति मगर